Mogadishu Journal » Faahfaahinta khasaaraha ka dhashay qarixii ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho
Faahfaahinta khasaaraha ka dhashay qarixii ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho
Mjournal :-Waxaa isasoo taraya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee uu geystay qarixii Maanta barqadii ka dhacay Bar Koontorool oo ku taalla Isgoyska Sayidka ee Magaalada muqdisho.
Daka qaraxaas ku dhintey ayaa waxaa kamid ah Agaasimihii Maamulka & Maaliyadda ee Wasaaradda Haweenka Bile Ismaaciil Diiriye iyo Cabdirashiid Sharaar oo kamid ahaa la-taliyeyaasha Xafiiska gudoomiyaha Golaha Shacabka.
Sidoo kale waxaa jira mas’uuliyiin iyo dad kale oo ku dhaawacmay qaraxaas,kuwaas oo lagu daweynayo qaar kamid ah Isbitaallada Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax dheere waxaa uu sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen Saddex Ruux halka Lix kale ay ku dhaawacmen walow dhimashada ay intaasi ka badan tahay.
Guddoomiyaha doorashooyinka Qaranka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kulmay